လေနုအေး: နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်
Posted by တန်ခူး at 5:54 PM
ဟင့်.. အသစ်လာဖတ်ပါတယ် တက်ဂ်ဂိမ်းနဲ့ တွေ့ပါပေါ့။
ခုမှ နလန်ထခါစကို။ လုပ်ရက်ပ( မရေးချင်သလိုလို လေသံနဲ့ ဖတ်ပါ။)
ဒါပေမယ့် ရေးပေးပါ့မယ်နော်... မကြာမီ လာမည်။
ပဲပြုတ်တဲ့ အဟင့် မနက်စောစော အသံကျယ်လွန်းတယ်ဆိုပြီး စိတ်မတိုရတာကြာပြီ။ ဆနွင်းဝါလေးဆွတ်ထားတဲ့ ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်လေး လွမ်းလွန်လွန်းလို့။
Tag ထားတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ်နာမည်ကို ထိပ်ဆုံးက တွေ့လိုက်တော့ အရှေ့မှာ တန်ခူးရေးထားတာကို ဖတ်ရင်း တစိမ့်စိမ့်တွေးရင်း အမေ့အိမ်ကို လွမ်းနေတဲ့ အလွမ်းတွေတောင် နဲနဲ လွင့်ထွက်သွားတယ်... မနဲ လိုက်ဖမ်းဆွဲထားရတယ်...။
တရက် နှစ်ရက်တော့ တန်ခူးရေးထားတာကို ဖတ်ရင်း လွမ်းပါရစေအုံးနော်... ပြီးရင် ရေးပေးပါ့မယ်။
ဒီပိုစ့်က တော်တော်ခက်တယ် တန်ခူးရဲ့... (အထူးသဖြင့်တော့ ဒီနေ့လက်ရှိအကြောင်းတွေကိုသာ စိတ်ဝင်စားပြီး မနက်ဖြန်အကြောင်းကို မသိချင် မစဉ်းစားချင်တတ်တဲ့... ဟိုးခပ်ဝေးဝေးကို မျှော်ကြည့်လေ့မရှိတတ်တဲ့... ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းပဲလို့ တွေးတတ်တဲ့... ကိုယ့်လို လူမျိုးအတွက် ပိုခက်တယ် သိလား...)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်ပါ့မယ်...
ဒါပေမယ့် တန်ခူးရေးသလိုတော့ ကောင်းမယ်မထင်...
လူငါးယောက်ကို ပဲပြုတ် ၁၅ကျပ်သား နည်းတယ်။
မအယ်လမ်းကြုံလို့ ဝင်လာရင် တယောက်ထဲတောင်လောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
သားနဲ့ ချွေးမကိုလည်း ကျောင်းကို ဆက်ဘီးလေးနဲ့ သွားတာ ကျန်းမာရေး အတွက်ပေါ့နော်။
အော်အီးအီး အွတ် မဟုတ်ဘူးလားလို့ ။ အောက်အီးအီးအွတ်လားလို့ ပါ။
ဒီပို့စ်လေးထဲကလို မိသားစုဘဝလေးတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်တုန်းကတော့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြဖူးသူတွေ တော်တော်များများရှိကြမှာပဲ။ (အတိအကျ မဟုတ်တောင် ခပ်ဆင်ဆင်လေးတွေပေါ့)။ ခုတော့လည်း နောင်လာမဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ယာယီ ရွှေ့ထားလိုက်ကြရပြန်ပြီ။ သြော်... ဘဝတွေ
ဒါပေမယ့် ခုတလော ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီး ဆက်ရေးဖို့ လက်ရှောင်ချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ။ မမတန်ခူး တဂ်လို့ပါလို့ ပြောပြီး လုပ်လက်စကို ရပ်ထားလိုက်လို့ ရတာပေါ့။
မမ ပြောသလိုဆို ဘ၀က အတော်နေပျော်စရာ ကောင်းမှာပဲနော်။ အဲလို နေဖို့ ဘာလို့များ ခက်နေရတာလဲ လို့ တခါတခါ တွေးမိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့များလဲ။ ????
Make yourself crazy..
Better Dream More..
ပျော်စရာ မိသားစုလေး ပဲ
အစ်မတန်ခူးက ရေရေလည်လည် စိတ်ကူးယဉ်ပစ် လိုက်သကိုး။ ချွေးမလောင်းလေးက ဘယ်သူများဖြစ်မယ်မသိ။ သမီးရှင်တွေတော့ စဉ်းစားကုန်ကြတော့မယ် :)။
အစ်မ တက်ဂ်တာလည်း ခပ်ကောင်းကောင်းပါ။ ခုတလော ရေးစရာ မရှိဖြစ်နေတယ်။ ကြိုးစားပြီး ရေးမယ်နော်။
အမရဲ့ နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ် စီမံကိန်းတကယ်ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးမယ်နော်.. တကယ်ပဲ သားရယ် ချွေးမလောင်းရယ်နဲ့ ပျော်စရာကြီး.. :)
အမရေ.. အခုတလော စာမရေးဖြစ်ပဲ Blog ကြီး ငြိမ်နေတာသာကြည့်တော့..:P ရေးတော့ ရေးပေးမယ်နော်.. ထုံးစံအတိုင်း ဘိတ်ပဲဖြစ်နေမှာ.. :D
(အထူးသဖြင့်တော့ ဒီနေ့လက်ရှိအကြောင်းတွေကိုသာ စိတ်ဝင်စားပြီး မနက်ဖြန်အကြောင်းကို မသိချင် မစဉ်းစားချင်တတ်တဲ့... ဟိုးခပ်ဝေးဝေးကို မျှော်ကြည့်လေ့မရှိတတ်တဲ့... ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းပဲလို့ တွေးတတ်တဲ့... ကိုယ့်လို လူမျိုးအတွက် ပိုခက်တယ် သိလား...)
copied from ama Thetwai,
same as ama Thetwai....
i ve no idea for future.
When I was young, i vealot of dream. after i was an engineer student, i ve no future.
တန်ခူးရေ... မျောသွားလိုက်တာ.. အဲဒီလို ငြိမ်းအေးတဲ့ ဘ၀လေးထဲမှာ ဘယ်လောက် အေးချမ်းလိုက်မလဲလို့နော်...။
နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျရင် တို့လည်းလေ တန်ခူးဆီလာပြီး အတူတူ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားကြတာပေါ့...( စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလို့ အတင်းဝင်ပါလိုက်တာ.. :)
တန်ခူးပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးတော့ ဒီလိုလေးပဲ ဖြစ်ချင်နေတယ်..စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်..
ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရောက်နေပြီး နောင် အနှစ်နစ်ဆယ်ကို ကန့်လန့်ရေးမလို့၊ မ က ဆွတ်ပျံ့လွမ်းမောစွာရေးတတ်သော... လို့ အစချီထားတာနဲ့ အီလည်လည်ကြီးဖြစ်လို့ ပြန်သွားပါပြီ။ ရေးစရာ ကုန်ကြမ်းကုန်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ၊ မကြာခင်ရေးပေးပါမယ်နော်...
နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို တန်ခူးရေးထားတာ ဖတ်ရင်း အခုကို လေနုအေးတွေ ညှင်းသွဲ့လာသလိုလို...
ရေးပြီးပြီနော် တန်ခူး...တက်ဂ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူး...
ဖတ်ပြီးအနှစ် ၂၀လောက် မုဒိတာပွားနေနိုင်မယ့် ပို့စ်လေးပါဗျာ...။
ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ ...း)
အဲလိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး နေချင်လိုက်... ဖတ်ရင်း အမ ခေါ်ရာနောက်ကို တကယ်ပါသွားပါတယ်။
တန်ခူးရဲ့ အနာဂတ် အိမ်မက်လေးက ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။ ကြီးတော်တန်ခူးက ချွေးမလောင်းတွေ ဘာတွေ တောင်ရလို့။ ဟိ ...
တက်ထားတာတွေ့တယ်တန်ခူးရေ။ လာမယ် ... ကြာမယ် နော်... ဟဲဟဲ ... ဟိုနေ့က ညီမလေးတစ်ယောက် နစ်နိမ်းအကြောင်းတက်ထားတာတောင် မရေးရသေးဘူး။ စာကြွေးတွေများနေပြီတန်ခူးရေ။
ကောင်းတယ်ဗျာ။နောင်လာမည့် အနှစ် ၂၀
ရေးပြီးပြီ... မ.. ရေ......း)
မ ရေ… နေကောင်းမှ အေးအေးဆေးဆေး ရေးပါ မ ရေ… စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်နေမှာပါ… ဖတ်ချင်လို့ … ကျေးဇူးပါ မ ရေ…
ဟုတ်ပြီ… ဦးနှောက်သိပ်မစားရတော့ဘူး… အိမ်လာလည်ရင် ဆနွင်းဝါ၀ါနဲ့ ပဲပြုတ်ထမင်းကျော်ရယ်… ဗူးသီးပေါက်ချောင်းကြော်ရယ် ကျွေးမယ်…
သက်ဝေရေ… ကောင်းလိုက်တာနော်…တကယ်ဆို ဒီနေ့ လက်ရှိအကြောင်းပဲ စဉ်းစားသင့်တာပါ… ဒါကြောင့်လဲ တို့ သက်ဝေတို့နုပျိုနေတာနေမှာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးပေးမယ်ဆိုတော့ ပျော်သွားပြီ…
မအယ်လာမယ်ဆို ပဲပြုတ်(၅၀)သား ၀ယ်ထားလိုက်မယ်… တကယ်လာခဲ့နော်… စိတ်ကူးထဲမှာ ခဏထွက်ပေါက်ပေးကြည့်တာပါ… ခဏငြိမ်းချမ်းသွားတာပေ့ါ မအယ်ရယ်… အဲ… အောက်အီးအီးအွတ်လား…
အဲဒီလိုနေဖို့ဘာလို့ များခက်နေတာလဲ… ဟုတ်ပါရဲ့ညီမရယ်… နောက်ဆက်တွေးမိသွားတာက လက်ရှိအခြေအနေမှာ တကယ်ရော အဲဒီလို နေလို့ ဖြစ်နိုင်မှာလား… အင်း… စိတ်ကူးထဲမှာတော့…
Anonymousရေ… ရူးသွပ်တာလား… ဒါဆို အဲဒီလို ရူးသွပ်ရတာ အတော်ငြိမ်းချမ်းတာပဲ… ကျွန်မကတော့ တခါတခါ အဲဒီလို ရူးသွပ်ချင်မိတယ်…ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အိပ်မက်လေးတွေလဲ အမြဲမက်ချင်ပါတယ်…
ကျေးဇူးပါမောင်ငယ်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ဟုတ်တယ်… စိတ်ကူးတွေ အသားကုန်ယဉ်ပစ်လိုက်တာ ပုံရိပ်ရေ… ချွေးမလောင်းလား… ပစ်မှတ်က တခုထဲမဟုတ်ဘူး… အများကြီးပဲ… ဟဲဟဲ… ပုံရိပ်လက်ရာလေးမျှော်နေမယ်နော်…
နုရေ… လွမ်းလို့ တက်ဂ်တာ… အဲလိုကြီး အကြာကြီးမနေနဲ့ လေ…
မြတ်နိုးရေ… အသက်တွေကြီးလာတာနဲ့ အမျှ မျှော်လင့်ချက်တွေက မှုန်ဝါးလာတာပါပဲညီမရယ်… ပါးလျလျ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ အသက်သွင်းပြီး ရေးကြည့်ပါဦး… မျှော်နေမယ်….
မ ရေ… ဘုန်းကြီးကျောင်းအတူတူသွားပြီး ဘလော့ဂ်အကြောင်းလေး ပြောကြရအောင်… အဲ… ဟုတ်ပါဘူး… တရားတူတူထိုင်ရအောင်နော်… ရေးပေးပါ မ ရေ… ဒီမှာမျှော်နေတာ….
အိမ့်ရေ… ဟုတ်တယ်နော်… ဒီအကြောင်းရေးမယ်တွေးရင် စိတ်က နှစ်မျိုး… အမတော့ စိတ်ချမ်းသာရာလမ်းကို လိုက်ပစ်လိုက်တာ…
မ ရေ… လေးနက်တည်ငြိမ်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ တက်ဂ်ပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မ ရယ်….
ကိုသစ်နက်ဆူး… အဲဒါက စိတ်ကူးလေ… တကယ်ဟုတ်သေးဘူး…အားမကျနဲ့ ဦးနော်… စောသေးတယ်… တကယ်ဖြစ်လာရင် အတူတူပဲဖြစ်ကြမှာပေါ့…
ခဏလေး စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ရယ်လို့ချိုသင်းရေ…
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး ခံစားရရင် ဖန်တီးရကျိုးနပ်ပါပြီ မိုးခါးရေ… ခုတလော လူတွေက ပူပူလောင်လောင်ကြီးမိုလား…
အမခေါ်ရာနောက်လိုက်ခဲ့တာ ကျေးဇူးပါညီမနွေးရေ… ပျော်တယ်မိုလား….
ဖတ်ပြီးပြီ… ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ အများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့ ညီမလေးရီတာဖြစ်ပါစေလို့ … ကျေးဇူးပါညီမရေ…
ဆွိရေ…မရေးပေးရင် အိမ်ရှေ့ က အကြွေးလာတောင်းမှာနော်… အိမ်လာလည်ချင်တာ အကြောင်းပြကောင်းသွားတယ်…
အိမ့်ရေ… နိမိတ်ကောင်းတဲ့ တမ်းတဖွယ်ပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါညီမရေ…
sorry for too late .
My new house has not connect internet yet.